IMPAHLA YANGAPHANTSI EHAMBELANA NGOKUGQIBELELEYO NESIBINI ONOKUYITHENGA KWI-INTANETHI - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane Izambatho zangaphantsi ezitshatileyo ezithandekayo niyakukuthanda nobabini
Izambatho zangaphantsi ezitshatileyo ezithandekayo niyakukuthanda nobabini
Ezi seti zangaphantsi zangaphantsi zezibini ziyindlela emnandi yokunxibelelana neqabane lakho.
Nokuba ujonga indlela entsha yokuziva usondele kwi-SO yakho. okanye ufuna nje nizonwabise kunye Ukuthelekisa ii-undies kunokuba yimpendulo. Yindlela echuliweyo yokulungelelanisa iimpahla zakho-kwaye akukho mntu wumbi kufuneka azi. Ukulinganisa iimpahla zangaphantsi kwizibini ezitshatileyo kukwayindlela eyahlukileyo yokudala unxibelelwano naxa uku hayi ngokwasemzimbeni kunye , iyenza enkulu isipho sobudlelwane obude . Isibini ngasinye siya kuba sisikhumbuzo esihle seqabane lakho ngalo lonke ixesha uzinxiba kwaye ngokungafaniyo. Ukuba oko akonelanga ukukuqinisekisa, ukulungelelanisa ukusondelelana kwakho kunokuba yindlela yokudlala yezinto zokucoca izinto kwigumbi lokulala. Ukulungele ukuthatha intshontsho? Sifumene ezona mpahla zangaphantsi zibalaseleyo onokuzithenga ngokulula kwi-Intanethi.
1. Ukulungelelaniswa kombala
Indawo yethu esiyithandayo yokuchola iiseti zangaphantsi zeesibini ezifanayo. Kukho iintlobo ngeentlobo zezitayile ezikhoyo, ukusuka kokungathathi hlangothi okungathathi hlangothi ukuya kwimibala eqaqambileyo kunye neepateni zokuzonwabisa-into elungele zonke iimvakalelo. Ikhenkce kwikhekhe? Akunyanzelekanga ukuba ibe sisivumelwano sexesha elinye. Ungabhalisela i izambatho zangaphantsi zababini kwaye unezibini ezilinganayo ezihanjiswa kanye emnyango wakho inyanga nenyanga.
MeUndies ukumatanisa izibini, ukusuka kwi- $ 30 kunye nobulungu, MeUndies.com
2. Amachaphaza ePolka
Iiseti zangaphantsi zesibini zingenza ingxelo efihlakeleyo. Uyilo lwamachaphaza amnyama amhlophe kunye namhlophe kumanqindi manqindi nakwizishwankathelo sesitshixo esisezantsi. Yenziwe ngomqhaphu okhanyayo kunye nomoya, ziyilelwe ukuziva zikhululekile imini yonke. Owu, kwaye ungakugqiba ukujonga nge ukulingana okuhle .
amantombazana les amakhwenkwe emnyama / emhlophe pin ichaphaza yamanqindi ebhokisi, $ 40, imvbintatshintsh.com ; amantombazana les amakhwenkwe ezimnyama / ezimhlophe ezimhlophe ezichaphaza iifutshane, $ 26, imvbintatshintsh.com
3. Amacandelo ahlukeneyo
I-TomboyX inezona mpahla zangaphantsi zihambelana kakhulu nezibini ngenxa yendlela yabo yokuziphatha ngokwesini. Zineendlela ezininzi ezimibalabala nezizodwa kuluhlu olwahlukeneyo lokusika. Khetha ngokulula uyilo oluthandayo kwaye emva koko wena neqabane lakho ninokhetha ubungakanani obufanelekileyo. Okanye, khetha ukusikwa okufanayo kodwa ngemibala eyahlukeneyo ( Ingqokelela yemvula yindawo efanelekileyo ukuqala).
TomboyX iimpahla zangaphantsi ngeendlela ezahlukeneyo, amaxabiso ayahluka, TomboyX.com
4. Uyilo lweDonut
Etsy yenye indawo entle yokujonga iimpahla zangaphantsi ezizodwa. Le mpahla yangaphantsi yomtshato ethandekayo ngokuqinisekileyo iya kukonyusa zombini iimood zakho nanini na uyifaka. Ukuprintwa okumnandi kunye nemibala yedonut ngokuqinisekileyo kuyonwabisa.
VARu isibini esilinganayo sangaphantsi kunye noshicilelo lwe donut, $ 63, Etsy.com
5. Ubunzima beFomalwear
Ukuba uzingela uSuku lweValentine- okanye iiholide zangaphantsi ezilinganayo ezenzelwe izibini ezitshatileyo, Ubumhlophe yindawo yokujonga. Uya kufumana ulonwabo oluninzi, izitayile zonyaka zakho kunye nesiqingatha sakho. Kodwa phakathi kweholide, kukwakho nokukhethwa kokuhlekisayo (kwaye ngamanye amaxesha okuqinisekileyo) kuyilo onokukhetha kulo. Ezi zimfutshane ze-tuxedo-eziphefumlelweyo zebhokisi yamanqindi zilungele ukuphuma kwakho okusemthethweni (molo, ubusuku bomhla !). Ibhonasi: Bancinciza ukufuma kwaye banesingxobo esakhelwe i-er-abafana abancinci.
Ubumhlophe I-009 tuxedo boxer izibini ezilinganayo iimpahla zangaphantsi 2 pack, $ 52, Shinesty.com
6. Ukuzonwabisa iiFlamingo
Ngaba ungatsho ukuba sithanda ubumnandi kunye nokushicilela okuvuthayo? Iseti yeFlamingo ehambelana nayo yenzelwe ihlobo. Kukhetho olukhulu kuso nasiphi na isibini esinembonakalo yesibindi.
Isinxibo sakhe isibini isambatho sangaphantsi esisekwe kwiPinki Flamingo, $ 35, Etsy.com
7. Iintyatyambo ezintle
Ngaba ujonge into entle ngakumbi? Thatha iiperi zezi zitya zeentyatyambo ziluhlaza okwesibhakabhaka wena kunye ne-SO yakho. nokuba uluthuli okanye usikekile — kuxhomekeke kulowo nalowo ukuba athathe isigqibo. Uyilo lweeleyiti ezimva ngasemva lunika ezi zambatho zangaphantsi zezibini. Awuyithandi intyatyambo? Kukho ezinye iiprinta ezimbalwa onokukhetha kuzo.
Ndithande kunye neNikki thong eBlue Floral, $ 25, AdoreMe.com ; Ndithande UHelene ugcwele i-Floral Blue, $ 25, AdoreMe.com
8. Uhlobo oluzinzileyo
Iindaba ezimnandi: Zininzi izinto onokukhetha kuzo zangaphantsi zohlobo lwe-eco-friendly kwaye-ewe, oko kubandakanya ukudibanisa izibini. Ukwenza into yakho kwiplanethi akuthethi ukuba kuya kufuneka uphoswe kukudibana nomntu omthandayo. Izambatho zangaphantsi ezithambileyo ezivela Zonke iintaka zenziwe ngezinto ezinokuhlaziywa. Bakwasebenza ukususa ukufuma kunye nokunciphisa ivumba-yeyiphi enye into onokuyifuna kwiibhulukhwe zangaphantsi zakho? Thatha isigqibo ngombala kwaye ukhethe ukusika kwakho (kukho amanqindi emanqindi, amakhwenkwe amfutshane, iifutshane kunye neentsimbi).
Zonke iintaka Ibhokisi ka-Trino yamadoda emfutshane, $ 24, Zonke iintaka.com ; Zonke iintaka Umfazi omfutshane weTrino, $ 20, Zonke iintaka.com
9. Uyilo lweBold
Nalu olunye ukhetho olukhethekileyo oluvela ku-Etsy ngokuprintwa okupholileyo kunye nemibala eqinisekileyo yokubamba ingqalelo ye-SO. Isinxibo seediliya siza kwenza ingxelo eyimfihlo phantsi kwempahla yakho.
Ukuthengiswa kweqela laseMelika izibini ezilinganayo iimpahla zangaphantsi, $ 20, Etsy.com
Indandatho yesithembiso ngezales zakhe
10. Ukuprintwa kwePop-yeNkcubeko
Enye indlela emnandi yokunxiba impahla yangaphantsi yezibini kukuthatha ukukhuthazwa kwiifilimu zakho ozithandayo nakwiinkqubo zeTV. Nakuphi na ukufa nzima Idabi leenkwenkwezi Umlandeli angayixabisa iperi yezi mbethi manqindi iphefumlelwe yi-franchise. Thatha ezimbini zohlobo olunye okanye udibanise kwaye utshatise-nokuba yeyiphi na indlela oza kulungelelanisa ngayo.
Umxholo oshushu Idabi leenkwenkwezi izibane kunye neenqanawa zebhokisi, $ 13, HotTopic.com ; Umxholo oshushu Idabi leenkwenkwezi ezimfutshane ezimnyama kunye ezimhlophe zemigca yamanqindi, $ 13, HotTopic.com
11. Uyilo lweBulldog
Ngaba udibene nomthandi wezilwanyana zasekhaya? Ukuba kunjalo, esinye isiqingatha siya kuthi uthando ezi zangaphantsi zinemibala ye-puppy-print. Ngubani ongathandani naloo bulldog inqabileyo inxibe umnqwazi wesitya? Ewe kunjalo, ukuba ayingomntu oyinja ngokwenene, kukho ezinye uyilo onokukhetha kuzo.
Iimfazwe kunye nabaPhengululi iimpahla zangaphantsi ezifanayo kwizibini ezitshatileyo eBulldog, $ 29, Amazon.com
12. Umqhaphu oCofileyo
Ukuba intuthuzelo yeyona nto iphambili kwindawo yakho, sikubekile. Endaweni yokukhetha iseti kunye noyilo oluhambelana ngokugqibeleleyo, kutheni ungathathi ulungelelwaniso lwezibini kuhlobo olunye? Ezi mbethi manqindi kunye nezifutshane zivela UTommy John's Ukuqokelelwa kweCotton epholileyo, okuthetha ukuba bayaphefumla, ukubila ngomjuluko kwaye bathambe ngokumangalisayo ukuqala. Qinisekisa ukuba ukhetha i-hue efanayo yengubo nganye yokulungelelanisa.
UTommy John Umqhaphu opholileyo ukhululekile ukuba ngumlo wamanqindi eMnyama, $ 34, TommyJohn.com ; UTommy John ICotton emfutshane kwiLace yeLace emnyama, $ 26, TommyJohn.com
iimpahla zomtshato zasehlotyeni zeendwendwe
Isithembiso ring iya ngaluphi umnwe
Iindawo ezigqibeleleyo zokutshata emva komtshato ngoMeyi